Fomba 6 tsy ampoizina, manampy anao hihena vetivety!
Raha efa nandramanao avokoa ny fomba rehetra hampihenan-tena saingy tsy nahomby izany dia andramo indray ireto manaraka ireto. Tsy dia ampoizina loatra izy ireo kanefa dia mahomby amin’ny fandrisihina anao ao anatin’ny ezaka fampihenan-tena
Mividy akanjo manara-batana
Tsy hampihena anao mivantana akory ny hividy akanjo vaovao saingy handrisika anao hihezaka sy haharitra hampihena vatana izany. Akanjo tsara tarehy manara-batana vidiana, na tsy tena antonona anao aza izany. Mividiana ihany koa akanjo fitondra amin’ny fanatanjahan-tena mba hampazoto anao hampihetsi-batana.
Fantaro fa hanafaingana ny vokatry ny “regime” atao ny spaoro. Tsy tena haharitra amin’izany anefa ianao raha toa ka ilay hihena fotsiny no mahatonga anao hanao spaoro. Tsara kokoa raha ataonao ao an-tsaina fa hahasalama anao, hanala ny rarin-tsainao sady hampitombo ny fahatokisan-tenanao ny fanaovana spaoro.
Mahay mankasitraka ny tena
Mba hampahiratra anao amin’ny ezaka mafy ataonao dia mametraha karazana fankasitrahana ho an’ny tenanao isaky ny mahavita ezaka tsara ianao. Azonao atao ao amin’ny efitranonao ohatra ny mametraka boatin-drakitra iray tantera-pahazavana ka isaky ny handeha hanao spaoro ianao na isaky ny nandingana andro iray tsy nitsakotsakoana dia mametraka vola ao anatin’ity boaty ity. Ho hitanao mivaingana amin’izay ny ezaka vitanao.
Mihetsika foana na miasa aza
Ho an’ny olona miasa birao dia mipetraka eo ambony seza manoloana ny solosaina no handaniana ny ampahany betsaka amin’ny fotoana. Iny fijanonana mipetraka ela iny koa anefa no fahavalon’ny fampihenan-tena. Andramo ny mihetsika matetika rehefa miasa. Torak’izany koa rehefa mijery fahitalavitra.
Miborosy nify foana
Na dia avy nihinana ody ambafavo fotsiny aza dia borosio ny nify mba tsy hazoto hitsakotsako firy intsony aorian’izay.
Mividy tavoahangin-drano tsara tarehy
Tokony hisotro rano betsaka raha te hampihena tena. Misy anefa no marisarisa amin’ny fisotroana izany. Mba hampazoto anao dia izao atao : mividiana “gourde” na fitahirizan-drano tantera-pahazavana tsara tarehy iray. Asio didina voasarimakirana, didina kaokaombra, voankazo mena mba hanomezan-tsiro ilay rano sy hampazoto anao hisotro azy.